Xaaska Wariyaha la dilay AUN Jamaal Khashoggi oo codsi soo jeedisay – Radio Daljir
Xaaska Wariyaha la dilay AUN Jamaal Khashoggi oo codsi soo jeedisay
Oktoobar 30, 2018 5:02 b 0
Hatice Cengiz, oo ah xaaska AUN wariyihii Sacuudigu jarjaray ee Jamaal Khasoggi ayaa dalbatay caddaalad, kadib markii ay ka qaybgashay munaasabad geeridiisa loogu tacsiyadeeynayay oo kadhacday magaalada London.
Gabadhan uu wariyuhu ka geeriyooday ayaa sidoo kalle dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ka dalbatay inuu goob ku sheego halka ay jirkiisa uu ku dambeeyey wariyaha la dilay.
Hadal qiiro leh oo ay jeedisay ayay ku sheegtay ” Waxaan rumaysnahay dowladda Sacuudiga inay ka warhayso halka la geeyey jirka Kashoggi, waana inay jawaab iga siiyaan dalabkayga, oo ma’ahan mid xaasnimo oo kaliya ee waa mid banii’aadantinimo iyo dalab Islaanimo ah”
Wariye Khashoggi ayaa lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul 2dii October, waxaana ay beesha caalamka ugu baaqday Cengiz inaan dilkiisa aan dawool la saarin.
“Waxaan doonayaa cadaaladda inay shaqayso, kaliya ma’ahan dilka wariyaha oorigayga ahaa , balse waa kuwii fuliyay , kuwii ammarka bixiyay, mana ahayn su’aalb aniga kaliya igu kooban ee waa mid malaayiin qof ay iswaydiinayso” ayay kusii dartay hadalkeeda.
“Waxaan sidoo kalle doonayaa in siyaasadda dilka wuxuushnimada ah layrka lagu igiyo” ayay sidoo kalle ku dartay.
Cengiz ayaa madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ku eedaysay inuu si cod yar ah uga hadlay dilka wariyaha oo uu muujin dareenkii looga baahnaa inuu muujiyo, isagoona u danaynaya shirkada hubka soo saara Mareykanka dhaqaalaha ay ka helaan Sacuudiga.
Jamaal Khashoggi ayaa u tagay qunsuliyadda Sacuudiga arrimo la xiriira sidii uu u qaadi lahayn xaaskiisa oo ku mahersanayd muddo afar bilood ah, balse halkaasi ayaa waxaa ku dhex dilay sirdoonka Sacuudi Carabiya.
Soomaaliya oo aan lagu casuumin ka qaybgalka garroonka ugu wayn ee laga furayo Istambnuul